China Mini bvudzi bhurasho nemavara erabha unhani, uv magetsi, mvura yekufambisa fekitori uye vagadziri | Yongsheng
Mini bvudzi bhurasho nemavara erabha unhani, uv magetsi, kuendesa mvura
Diki Inotakurika Saizi - Petite saizi yekuchengetera zvirinani, yakanaka kune yako yakabatikana yehupenyu hwezuva nezuva. Ramba uri mubhegi rako rekubata kumusoro uchienda. Mini bvudzi bhurashi rinoshanda rakakura pane rakanyorova kana rakaoma bvudzi uye rakanakira varume, vakadzi uye vana. Isu tinoita kuti mabrashi ave madiki, anotaridzika uye akakwana ehupenyu pane-iko-kuenda. Petite saizi yekuchengetera zviri nyore, nyore muchikwama chako, uye vana vanochidawo .Rino bhurasho rinoshanda kwazvo pane rakanyorova kana rakaoma bvudzi. Inokodzera vakadzi, varume nevana, vhudzi refu kana pfupi, rakatetepa kana rakakora bvudzi rakamonana.
Yedu Diki Detangler Bvudzi Brashi inoratidzira Yakasarudzika, Iwo akasimba mabristles zvinyoro nyoro kukwiza ganda romusoro uku uchikurudzira kuyerera kweropa nekusimbisa bvudzi rako.
Yedu squirt Detanglers akagadzirwa zvine hungwaru kudzikisira marwadzo uye kudzivirira bvudzi pamipendero inopatsanuka uye kuputsika. Inoita kuti ubhururuke nesimba shoma kuti iwe ugone kudzikamisa nekukuvara kudiki kune rako bvudzi.
Zvakare isu tine akatiwandei akasiyana maumbirwo mumisoro uye mubato unogona kusarudzwa. Kubata nekubata zvakapfava kunogona kuve nyore kubata. Misoro yakasiyana inogona kushandiswa muzviitiko zvakawanda uye nezvose zvaunoda.
Kupeta uye compact dhizaini yekutakura zviri nyore. Mini saizi inokwana mushe muhomwe, chikwama, batira bhegi. Inokodzera kufamba, zuva, kunotenga, kubuda.
Pashure: Yakakurumbira nyowani yemaitiro bvudzi bhurasho
Zvadaro: Nyanzvi yakatenderera bvudzi bhurashi ine yakanyanya tembiricha yekudzivirira mune akasiyana maitiro
Disposable Bvudzi Brushes
Massage Wooden Bvudzi Brush
Square Wooden Bvudzi Brashi
Wen Bvudzi Brush
Mvere dzeBvudzi reMapuranga